ကိုယ္၀န္ေဆာင္ၿပီးေနာက္ ၀ိတ္က်ေစမယ့္ နည္းလမ္းမ်ားကို ေဖာ္ၿပေပးလိုက္ပါတယ္…. - Zeekwat Hot News
ကိုယ္၀န္ေဆာင္ၿပီးေနာက္ ၀ိတ္က်ေစမယ့္ နည္းလမ္းမ်ားကို ေဖာ္ၿပေပးလိုက္ပါတယ္….
July 6, 20190179
ဒါဟာ ၀ိတ္က်ခ်င္တဲ့ ေမေမေတြအားလုံးအတြက္ အေရးႀကီးဆုံး အခ်က္ပါပဲ။ သင့္ရဲ႕ ပိုလွ်ံေနတဲ့ အဆီေတြနဲ႔ ကိုယ္အေလး ခ်ိန္ကို ေန႔ခ်င္းညခ်င္း ခ်က္ခ်င္းဆိုသလို ခ်ပစ္လိုက္လို႔ မရပါဘူး။ နဂိုခႏၶၶာကိုယ္မ်ိဳး ရရိွဖို႔အတြက္ အခ်ိန္ယူရသလို ႏို႔ရည္ တိုက္ေကၽြးျခင္းကိုလည္း ၄င္းက သက္ေရာက္မႈ ျဖစ္ေစပါတယ္။ ဒါေၾကာင့္ စိတ္ရွည္လက္ရွည္နဲ႔ ေန႔စဥ္ပုံမွန္ ထိန္းသိမ္း သြားျခင္းျဖင့္ မၾကာတဲ့ကာလတစ္ခုမွာ သင့္နဂိုခႏၶၶာကိုယ္ အခ်ိဳးအစားကို ျပန္လည္ရရိွႏိုင္ပါလိမ့္မယ္။ေမေမမ်ားအားလုံးပဲ က်န္းမာလွပၿပီး မိမိကိုယ္ကို ယုံၾကည္မႈရိွေစတဲ့ ခႏၶၶာကိုယ္အခ်ိဳးအစားကို ပိုင္ဆိုင္ႏိုင္ၾကပါေစ။
Source : GoodHealth
ကလေးမီးဖှားပွီးတဲ့နောကျ တကျလာတဲ့ ကိုယျအလေးခြိနျတှကေို လြှော့ခခြငြျကွတာ မီးဖှားပွီးစ မိခငျအသစျစကျစကျမြား အားလုံးရဲ့ ဆန်ဒပဲဖွစျပါတယျ။ ကိုယျဝနျဆောငျပွီးနောကျ ကိုယျအလေးခြိနျလြှော့ခရြာမှာ ပမြျးမြှ ကိုယျအလေးခြိနျသာ တိုးသှားတဲ့ အမြိုးသမီးမြားအတှကျ ရိုးရှငျးသောျလညျးပဲ နဂိုထကျအဆမြားစှာ ၀ိတျတကျသှားတဲ့ အမြိုးသမီးတှအေတှကျ ကတော့ ခကျခဲပါတယျ။ ထိုပိုလြှံလာတဲ့အဆီတှဟော ရငျသားတစျရှူး၊ သားအိမျဖောငျးပှခွငျး၊ သှေးလညျပတျမှုနဲ့ အဆီ သိုလှောငျမှု စတာတှကွေောငျ့ ဖွစျစနေိုငျပါတယျ။ အမြိုးသမီးအမြားစုဟာ မီးဖှားပွီးနောကျမှာ ကလေးရဲ့အရှယျအစားနဲ့ ရမှှောအိတျ၊ အခငြျးတို့ရဲ့ အလေးခြိနျပေါျ မူတညျပွီး (၁၂)ပေါငျမြှ ကဆြငျးသှားတတျကွပါတယျ။ မီးဖှားပွီးနောကျ ယိုယှငျး ပွီး ကနြျခဲ့တဲ့ ကိုယျခန်ဓ်ဓာကို ယခငျအပြိုတုနျးကအတိုငျး ပွနျရရှိနိုငျအောငျ ပွုလုပျနိုငျတဲ့ နညျးလမျးတှေ ရှိပါတယျ။
ကိုယျဝနျဆောငျပွီးနောကျမှာ ကိုယျအလေးခြိနျ ကဆြငျးစနေိုငျမယျ့ အကောငျးဆုံးနညျးလမျးတစျခု ပွောရပါလြှငျ သငျအ့ံသွသှားပါလိမျ့မယျ။ သို့ပမေယျ့လညျး နို့ခြိုတိုကျကြှေးခွငျးဟာ ၀ိတျကစြဖေို့ အထိရောကျဆုံး ကူညီပေးနိုငျပွီး တစျနေ့လြှငျ (၅၀၀)ကယျလိုရီခနျ့ လောငျကြှမျးစနေိုငျပါတယျ။ ဒါ့အပွငျ နို့ရညျတိုကျကြှေးခွငျးဟာ မိခငျအတှကျတငျမက ကလေးအတှကျပါ အလှနျကောငျးမှနျပါတယျ။ ဒီနညျးလမျးကို အသုံးပွုမယျဆိုရငျ သငျ့ခန်ဓ်ဓာကိုယျမှာ အားအငျလောငျ ကြှမျးဖို့ လိုအပျမယျ့ အာဟာရတှကေို မဖွစျမနေ စားသုံးပေးဖို့ လိုအပျပါတယျ။ သို့မှသာ ကယျလိုရီအမွောကျအမြားကို ဟနျ့တားထားခွငျးအတှကျ နို့ထှကျနညျးခွငျးနဲ့ ကိုယျအလေးခြိနျ ဆကျတိုကျကဆြငျးမှုကွောငျ့ ကိုယျတှငျးက ထှကျလာတဲ့ အဆိပျအတောကျတှေ နို့ရညျထဲကို ရောပွှမျးသှားခွငျးတှကေို ကာကှယျနိုငျမှာ ဖွစျပါတယျ။
မီးဖှားပွီးနောကျမှာ မိခငျတိုငျး အလှယျတကူ diet လုပျလို့ မရနိုငျပါဘူး။ ဒါကွောငျ့ မညျသညျ့အစားအစာကိုပဲ ရှေးခယြျ စားသုံးသညျဖွစျစေ ကနြျးမာရေးနဲ့ ညီညှတျအောငျ ရှေးခယြျစားသောကျဖို့ လိုအပျပါတယျ။ နေ့စဉျ စားသောကျတဲ့ အစားအစာဟာလညျး သမမြှတဖို့ အလှနျအရေးပါပွီး သစျသီးသစျဥမြား၊ ဟငျးသီးဟငျးရှကျမြား၊ နို့နဲ့ အဆီမပါတဲ့ အသားမြား စတာတှေ ပါဝငျအောငျ စားသောကျဖို့ လိုအပျပါတယျ။ နို့နဲ့ နို့ထှကျပစ်စညျးတှေ စားသုံးတဲ့အခါ အဆီလြှော့ ထားတဲ့ အမြိုးအစားတှကေို ရှေးခယြျသငျ့ပါတယျ။ နေ့လယျခငျး အဆာပွေ စားသုံးတဲ့ မုနျ့တှဟောလညျး ဘီစကစျတှေ၊ အာလူးကွောျ ဖွစျမယျ့အစား သစျသီးတှနေဲ့ ဟငျးသီးဟငျးရှကျတှကေို အသားပေးထားတဲ့ အစားအစာတှဖွေစျဖို့ လိုအပျ ပါတယျ။ ဗီတာမငျနဲ့ အမြှငျဓာတျတှေ ကွှယျဝပွီး အဆီပါဝငျမှု နညျးပါးတဲ့ ပနျးသီး၊ လိမ်မောျသီး၊ ဘယျရီးသီးမြား၊ ငှကျပြော သီးနဲ့ မုနျလာဥနီ အစရှိတာတှကေို အဆာပွမေုနျ့အနနေဲ့ စားပေးသငျ့ပါတယျ။
ကနြျးမာရေးနဲ့ ညီညှတျတဲ့ စားသောကျပုံနဲ့ ပုံမှနျ ကိုယျလကျလှုပျရှား လေ့ကငြ့ျခနျးတှေ ပေါငျးစပျလိုကျခွငျးအားဖွငျ့ အဆီ ပိုတှနေဲ့ ကိုယျအလေးခြိနျကို မှနျကနျစှာ ကဆြငျးစနေိုငျပါတယျ။ ဒီနညျးလမျးဟာ အဆီပိုတှကေို ကဆြငျးစမှောဖွစျတဲ့ အပွငျ ကွှကျသားတှကေိုလညျး တငျးရငျးလှပစမှော ဖွစျပါတယျ။ ရိုးရှငျးတဲ့ လေ့ကငြ့ျခနျးမြားဖွစျတဲ့ လမျးလြှောကျခွငျး၊ ယောဂလေ့ကငြ့ျခွငျး၊ အကွောလြှော့လေ့ကငြ့ျခနျးမြား၊ စကျဘီးစီးခွငျး၊ ရှရှပွေးခွငျးနဲ့ ရကေူးခွငျး အစရှိတာတှနေဲ့ အစပွု နိုငျပါတယျ။ အဆိုပါ လေ့ကငြ့ျခနျးတှကေို သငျ့ရငျသှေးလေးနဲ့အတူတူ လုပျဆောငျနိုငျပါတယျ။ လမျးလြှောကျတဲ့အခြိနျမှာ ကလေးကို လှညျးထဲထညျ့ပွီး တှနျးသှားတာမြိုးကဲ့သို့ ပွုလုပျနိုငျပါတယျ။
ဒါဟာ ၀ိတျကခြငြျတဲ့ မမေတှေအေားလုံးအတှကျ အရေးကွီးဆုံး အခကြျပါပဲ။ သငျ့ရဲ့ ပိုလြှံနတေဲ့ အဆီတှနေဲ့ ကိုယျအလေး ခြိနျကို နေ့ခငြျးညခငြျး ခကြျခငြျးဆိုသလို ခပြစျလိုကျလို့ မရပါဘူး။ နဂိုခန်ဓ်ဓာကိုယျမြိုး ရရှိဖို့အတှကျ အခြိနျယူရသလို နို့ရညျ တိုကျကြှေးခွငျးကိုလညျး ၄ငျးက သကျရောကျမှု ဖွစျစပေါတယျ။ ဒါကွောငျ့ စိတျရှညျလကျရှညျနဲ့ နေ့စဉျပုံမှနျ ထိနျးသိမျး သှားခွငျးဖွငျ့ မကွာတဲ့ကာလတစျခုမှာ သငျ့နဂိုခန်ဓ်ဓာကိုယျ အခြိုးအစားကို ပွနျလညျရရှိနိုငျပါလိမျ့မယျ။မမေမြေားအားလုံးပဲ ကနြျးမာလှပပွီး မိမိကိုယျကို ယုံကွညျမှုရှိစတေဲ့ ခန်ဓ်ဓာကိုယျအခြိုးအစားကို ပိုငျဆိုငျနိုငျကွပါစေ။
ထုိင္းစတုိင္ ပဲၾကာဇံသုပ္ကို အလြယ္တကူသုပ္နည္းကို ေဖာ္ၿပေပးလိုက္ပါတယ္….